Nyere Patrice Emery Lumumba - Afrikhepri Fondation
Mkpagbu na Patrice Emery Lumumba
Pa Mariam C
Ne amatala asịrị, mkparị, ihe otiti ndị anyị kwesịrị ịta ụtụtụ, ehihie na anyasị n'ihi na anyị bụ ndị na-eleghara anya "" Anyị ga-egosi ụwa ihe onye isi ojii nwere ike ime mgbe ọ na-arụ ọrụ na nnwere onwe. "Enweghị nsọpụrụ enweghị nnwere onwe, na-enweghị ikpe nkwụmọtọ enweghị nnwere onwe, yana enweghị nnwere onwe enweghị ndị nweere onwe ha". "Akụkọ ihe mere eme ga-ekwu otu ụbọchị, mana ọ gaghị abụ akụkọ ihe mere eme na anyị ga-akụzi na Brussels, Washington, Paris ma ọ bụ na United Nations, mana ọ bụ nke anyị ga-akụzi na mba ndị enwerela onwe ha na colonialism na ya puppets ”. "Africa ga-ede akụkọ nke ya ma ọ ga - abụ, ugwu na ndịda na Sahara, akụkọ nke ebube na ugwu".
Lee ụfọdụ okwu si leta ikpeazụ Patrice Lumumba degaara nwunye ya. Nwoke a nke aha ya so na ndị ndú mbụ nke African-Africanist bụkwa onyeisi nke ndị ọchịchị nke DRC ugbu a na 1960 mgbe nnwere onwe. Ihe ojoo ya bu ochicho ichoro obi uto ya na obodo Afrika.
30 June 1960, ka Congo jikọtara ememe mmeghe nke nnwere onwe n'okpuru yok nke ndị Belgium, Lumumba weere ala iji kwuo okwu ga-akara ụwa niile. N'oge a dị mkpirikpi, mmadụ enwetala nnukwute mpako na ọnụ ọgụgụ nke ụfọdụ na nnukwu iwe na mines ụfọdụ. Daybọchị a, mmemme jikọtara ọnụ site na ntinye nke okwu Patrice Lumumba, kwụsịrị n'ụkpụrụ nke "ndọrọ ndọrọ ọchịchị ziri ezi". Eze Beljium, were iwe na mmechuihu n'ihi na o chere ya aka mgba, na agbanyeghị aka ya na ebony, a na-ewere dị ka "ihe a na - ebugharị ebugharị". N'ezie, ọchị ji ihu abụọ na mkpu otuto mezuru.
Okwu Patrice Lumumba kwuru n'oge a site Ollag
Onye ike nke Congo na Afrịka maara nke ọma ihe ọ dị ka omume. Ma onye agha adịghị agbachitere onwe ya n'ụlọ ya iji tie mkpu ihe ọ na-eche banyere onye iro ya. N'oge ahụ, ọbụna n'ime nkeji nke ikwupụta nnwere onwe, ọ dịghị onye ndú Africa nwere ike ịkatọ iwu nchịkwa nke steeti ya na-enweghị nkwado nke onye nchịkwa ahụ, n'ihe ize ndụ nke ịhapụ akpụkpọ anụ ya. Mana Lumumba maara ya, ọ maara na onye ọ bụla maara na ọ bụ eziokwu zuru oke niile ọ pụrụ ikwu na-agba ọsọ okwu ya. Ka o sina dị, ọ hụrụ olu nke ndị na-enweghị olu na-ekwu na ọ bụghị n'ekpere, imperialism, isi obodo na nlelị.
Taa, Patrice Lumumba bụ Nwụrụ Anwụ, imperialism dị ndụ, neocolonialism na-eku ume, ọchịchị nke dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ụwa na-aghọwanye ihe na-emetụta, ndị nlelị na-echekwa nlelị anya.
Taa Patrice Lumumba anwụọla! Onye ya, echiche ya, nkwenye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya, ịhụnanya ya maka Congo na Africa ka na-anwụ anwụ. N'ihi na onye ọ bụla n'ime anyị na-alụ ọgụ maka nnwere onwe na mmepe nke mba Africa anyị, anyị sitere n'ike mmụọ nsọ ya n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
Achọrọ m ịkwụ ụtụ maka nnukwu Afrika a, ndi mmadu site na obere ederede a. Achọpụtara m ya n'oge na-adịbeghị anya, ọ dịkwa mwute na enweghị m ohere ịmara ya. Ee, ana m akpọ ya ohere, ma ọ bụ kwuo na ọ bụrụ na ngọzi gaara abụrịrị ụdị nwoke a dị ụkọ. Ọ na-ewe guts na audacity dị ịtụnanya maka ịchụ àjà dị otú ahụ ịmara ihe nwere ike isi na ya. Mana ịhụnanya o nwere maka obodo ya na ndị ya, nchekwube ya na olile anya ya maka ọdịnihu. Readgụ "oge na Congo" nke Aimé Césaire, karịrị akwụkwọ a na-atọ m ụtọ ịmụ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Kemgbe ahụ, akwụsịbeghị m izute nwoke akụkọ mgbe ochie mgbe ọ bụla enwere m ohere. Patrice Emery Lumumba na-ezu ike n'udo!
Site na Coulibaly Mariam
PATRICE LUMUMBA: SPEECHES, leta, TEXTS
Zụta € 16,95
Oge emelitere ikpeazụ na Mee 7, 2021 1:38
Gịnị bụ Afrocentricity?